एयर कुशन फिल्म, एयर कुशन मेशिन, एयर स्तम्भ मेशिन, एयर पिलो प्याकेजिंग - जुआन वांग
एयर कुशन फिल्म
एयर कुशन मेशीन
एयर स्तम्भ मेसिन
एयर पिलो फिल्म २००x100
एयर पिलो फिल्म २००x1...
लोगोको साथ एयर तकिया
लोगोको साथ एयर पिलो ...
एयर कुशन बबल र्याप 400x320
एयर कुशन बबल र्याप X...
एयर बबल फिल्म 400x160
एयर बबल फिल्म x००x१6...
इन्फ्लाटेबल एयर ट्यूब 400x320
इन्फ्लेटेबल एयर ट्यू...
PAPE एयर बबल 400x160
PAPE एयर बबल x००x१AP...
PAPE एयर तकिया 200x120
PAPE एयर पिलो २००x12...
हरियो रंग हवा पिलो २००x200
हरियो र Air्ग एयर पि...
वूशी जुआन वाang्ग प्याकिंग कं, लिमिटेड
हाम्रो कारखाना २००० मा स्थापित भएको थियो। सुरुमा हामी मुख्यतया उडाइएका फिल्महरूमा केन्द्रित थियौं। इ-कमर्सको उदयसँगै धेरै व्यक्तिहरूले अनलाइन किनमेल गर्न छनौट गरे जसले गर्दा हवाई कुशन प्याकेजि forको माग बढेको छ। बजार माग अनुसार हामीले छिटो उत्पादन लगानी योजना समायोजित गर्‍यौं। अब हाम्रो उत्पादन र बिक्री मुख्यतया एयर कुशन प्रणालीमा आधारित छ, र उत्पादनहरू दुवै देश र विदेशमा राम्रो बिक्री भइरहेको छ।
वूशी जुआन वाang्ग प्याकिंग कं, लिमिटेड एक ठूलो-ठूलो कम्पनी हो जसले फिल्म उड्ने, प्रिन्ट गर्ने, र झोला बनाउने एकीकृत गर्दछ। हाम्रो कारखाना २००० मा स्थापित भएको थियो र पीई / पीए प्याकेजि field क्षेत्रमा २० भन्दा बढी वर्षको व्यावसायिक अनुभव थियो। अब यसले professional००० वर्ग मिटर कभर गर्दछ, १२ पेशेवर चलचित्र फ्लाइंग मेशिन, पाँच प्रिन्टि equipment उपकरण, र २० बुद्धिमान झोला निर्माण उपकरण। उत्पादन क्षमता अझै अपग्रेड भइरहेको छ।
हाम्रो उत्पादनहरू वा प्रिसेलिस्टको बारेमा सोधपुछको लागि, हामीलाई एयर कुशन फिल्म, एयर कुशन मेशीन। कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं।
एयर स्तम्भ ब्याग भनेको के हो?
एयर स्तम्भको झोला एक pliable PA / PE सह-एक्सट्रुज़न प्लास्टिक सामग्री नाजुक वस्तुहरूको प्याकिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। बुलबुला र्‍यापको विपरीत, एयर स्तम्भ ब्यागसँग झोला फुलाउन वा कहिले कच्छ नाजुक वस्तु......
Inflatable प्याकेजि Products उत्पादनहरू
यो वास्तव मा एकदम सरल छ; शिपर बक्स यो समावेश गरेको उत्पादन भन्दा ठूलो छ। यदि बक्स राम्रोसँग आकारित छ भने, अतिरिक्त â € œairâ € स्पेसमा यो अंतर सजिलैसँग कागज, फोम बदाम सहित, कुनै पनि शून्य फिल उत्पाद र......
तपाईं एयर कुशन मेशिनलाई के भन्नुहुन्छ?
यो एयर कुशन मेशिनलाई एयर पिलो मेसिन, बबल र्याप मेशिन, एयर बबल मेशिन, बबल प्याकिंग मेशिन पनि भनिन्छ
बबल फिल्म र एयर कुशन बीच के भिन्नता छ?
प्याकिंग एयर बैग शिपमेंटको समयमा आईटमहरूको रक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ। ढुवानी र लोडिंग / अनलोडिंगको बेलामा कम्पन र प्रभाव झटका कुशनिंग द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ जब उत्पादन क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ।
ठेगाना: नम्बर १ नयाँ गाउँ, चांग्डोंग गाउँ, चांगजि Chan टाउन, जिआनजिन शहर, जि J्सु प्रान्त
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ वूशी जुआन वांग प्याकिंग कं, लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित